ध्रुवचन्द्र गौतमको साइकल हरायो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
ध्रुवचन्द्र गौतमको साइकल हरायो
ती को थिए ध्रुवचन्द्र गौतम, जसको यो सहरमा आजभन्दा ५० वर्षअघि एउटा साइकल हराएको थियो र, जो आज कोरोनाबाटग्रसित भएको छ ? एउटा रहस्यमयी कथाको सुरूआत र अन्त्य यस्तो छ ।
पुस २५, २०७७ देवेन्द्र भट्टराई
आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमको पछिल्लो उपन्यास ‘चकमन्नमा एकान्त’ मा एउटा अज्ञातझैं पात्र छ, जो मध्यरातको चकमन्नमा एकान्त चिर्दै मोटरबाइकमा एउटा निश्चित घरमा आउँछ र, हराउँछ । त्यो पात्र उही समयमा आउँछ, उही हुँकार लिएर आउँछ र, उसैगरी चकमन्नमा अलप हुन्छ । यस्तै अनेक अज्ञेय कुरा छन्- ध्रुवचन्द्रको हराएको साइकलमा ।
कुराको थालनी हुन्छ यसरी । एक दिन मध्याह्नमै यो सहरमा हल्ला फैलियो— ध्रुवचन्द्र गौतमको साइकल हरायो ।
क्याम्पसको आँगनमा पार्क गरेर राखिएको साइकल हरायो एकाएक । त्यो साइकल ध्रुवचन्द्र गौतमको थियो । पार्किङमा राखिएको लहरमा साइकल त निकै थिए, तर उनैको साइकल भने एकाएक हरायो । हिरो ब्रान्डको एउटा मझौला चाइनिज साइकल थियो, त्यति नयाँ होइन, पुरानो भनेर जडाउरी भैगएको थिएन । गौतम सरको ब्रान्डमा लुगा, कोट, रुमाल, मोजा र यहाँसम्म कि भित्री वस्त्रमा समेत एउटा सनातनी रङको मिल्ती थियो— ‘ब्ल्यु इज द वार्मेस्ट कलर’ टाइपमा । यसकारण भन्नै परेन, ध्रुवचन्द्रको हराएको साइकल पनि त्यही मार्का थियो— ब्ल्यु इज द कलर ।
त्रि–चन्द्रमा नेपाली साहित्य प्राध्यापन गर्ने ध्रुवचन्द्र पनि मझौला आकारकै थिए । चाबहिलको कुनोदेखि घण्टाघरसम्म दिनहुँ उनी त्यही साइकलमा आजतजावत गर्थे । न्युरोड पीपलबोट वा रश्मीको टेबल, भूपीको कालीमाटी–कर्नर होस् वा चिनारीमा सधैंसधैं भूमिगत रहेकी ‘श’ सँग टेकु दोभानमा उसै बहलिँदा होस्— त्यही साइकल साथी थियो, पूरापूर सहयात्रु ।
कतिसम्म भने त्रि–चन्द्रको कक्षा भ्याएर महाराजगन्जसम्मको ट्युसन पढाउन जाने लामो दूरी पनि यही साइकलले पूरा गर्थ्यो । यसको आगत–विगत जे–जति लुलो–कमजोर भए पनि इतिहास भनेको इतिहासै हो । जस्तो यो ‘सेकेन्ड हेन्ड’ साइकल २ सय रुपैयाँमा किनिएको थियो र, यसले ५–७ वर्षै काठमाडौं उपत्यकाको सडक नापेको थियो भन्दा पनि आश्चर्य लाग्न सक्ला । तर, हो यही नै— साइकल एक अपरिमित यात्रा ।
रमझमका नाममा यदाकदा रञ्जना सिनेमासम्म जानुपर्दा नयाँ सडक पर्तिरको भीडमा साइकल हराइजाला कि भन्ने भय पनि छँदै थियो । त्यही भएर त्रि–चन्द्रमै एउटा रूखमा साइकल बाँधेर राख्दै र हिँडेरै रञ्जना गल्ली पुग्नुपर्ने त्यो निकै फारु समय थियो । अथवा, कहिलेकाहीं लेखक–भेला वा कवि जमघटसम्म जाँदा पनि साइकल त्रि–चन्द्रमै छाडिने गरेको थियो ।
तर, यो पाला अचम्मै भयो । त्यस दिनयता सहरमा पूरै होहल्ला छाइसकेको रहेछ— ध्रुवचन्द्रको साइकल हरायो भनेर । फेरि शुक्रबार साइकल हराएको थियो, शनिबार क्याम्पस छुट्टी भैहाल्यो । आइतबारसम्म एक कान दुई कान गर्दै ध्रुवचन्द्रको हराएको साइकलको किस्सा भुसको आगोझैं सहरभरि धूवाँ बनेर पुत्पुताइरहेको थियो । अहिलेजस्तो मेसेन्जर, भाइबर वा कहीँकतै केही उपाय रहे–भएको भए नि तारन्तार खबर बुझ्नुहुन्थ्यो । अहँ, कुरा के हो, के–कता–कसरी साइकल हरायो भन्ने सोधपुछबिनै आगो फैलिसकेको थियो । नफैलियोस् पनि कसरी ? जहाँ नाम ध्रुवचन्द्रको गाँसिएको छ ।
आफ्नो पछिल्लो उपन्यास 'चकमन्‍नमा एकान्त' हेर्दै ध्रुवचन्द्र गौतम
सम्झेर ल्याउँदा साइकलसँग जोडिएका अनन्त किस्साहरू छन् । कुनै जुगमा वीरगन्जको जेलरोडमा कैंची स्टाइलले साइकल सिकेका थिए ध्रुवचन्द्रले । पछि रक्सौल, रामगढवासम्म पनि साइकलमै उनी पुग्थे । कहिलेकाहीं फिल्मी स्टाइलमा दुवै हात ‘फ्री’ छाडेर चलाइएको साइकल रेसमा पनि उनी पुगेका हुन्थे । ‘मेड इन वीरगन्ज’ ध्रुवचन्द्रका सहरमा आफ्नै खालका किस्साहरू थिए । जस्तो— उनी नायक दिलीप कुमारका डाइहार्ट फ्यान थिए । यदाकदा कुनै बान्की सम्झाउन दिलीप कुमार, राजकुमारका डाइलगहरू पनि कक्षाकोठामा र विद्यार्थीहरूका सामुमै उनी भनिरहेका हुन्थे । यो अनौपचारिक शैली यसकारण विद्यार्थी तान्ने (र, अरू कक्षाकोठाका समेत) एउटा ‘तरतिव’ थियो, मुहुनी कला भनौं न ।
सहरमा नायक दिलीप कुमार क्रेज छाएकै थियो । यो ‘फुटपाथ’ वा ‘जुगनू’ जस्ता फिल्मको जगजगी छाएका बेलाको कुरा हो । फ्यान–फलोवरमाझ दिलीपको ‘अदा’ मात्रै होइन, यदाकदा दिलीप–केशराशि वा उनको बोली, हिँडाइको सिको उतार्ने भूत पनि सवार हुन्थ्यो नै । एकपटक माड्सापले कालिकास्थानमा खोलेको आफ्नो फोटो स्टुडियोमा ‘स्टाइलिस्ट’ फोटो खिचाउने हक्की कस्टमर उनै ध्रुवचन्द्र थिए, जसलाई माड्सापले कपाल लरक्क तल फर्काएको र साइडमा सिउँदो कोरिएको छनकमा श्यामश्वेत तस्बिर खिचिदिएका थिए— मानौं, यो सहरमा नयाँ दिलीप कुमारको भर्खरै प्रवेश भएको छ । अनि त्यो जुल्फी र अदामा खुसी हुँदै फेरि साइकलमा सहरमा निस्कन्थे ध्रुवचन्द्र ।
यसरी साइकल–प्रतिष्ठामा यो सहरमा रमेर–रमाएर हिँड्ने अर्को कवि मनको पात्र कोही थियो भने एक जना रोचक घिमिरे मात्रै थिए, जो उझिन्डे झोलामा नयाँ वा पुरानो ‘रचना’ पत्रिका लिएर सहरमा पाइडल मारिरहेका हुन्थे । मझौला साइकलको पाइडल मार्ने कुरामा एक प्रकारले ‘गौतम भर्सेज घिमिरे’ झैं थियो, ऊबेलाको समय । तर रोचकको भने ब्रिटिस रेले कम्पनीको गियरयुक्त मझौला साइकल थियो, विशेष सानपट्टि झल्किने खालको । कहिलेकाहीँ अरुलाई सान देखाउने हेतुमा ध्रुवचन्द्र रोचकको साइकल सापटीमा मागेर पनि कुदाइहाल्थे ।
‘एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन : साइकल’
यसरी हुँदाखाँदाको साइकल एकाएक हराएपछि साइकलमा जोडिएका अनेक किस्साहरू पनि यादमा उनिएर आउने नै भए । एकताका भारतीय प्रखर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठमाडौं आएका थिए । ध्रुवचन्द्रको छिटपुट कवि चिनारी छाइसकेको थियो, भूपी शेरचनसहितको संगतले पनि यो चिनारी बढाउनमा मद्दत गरेको थियो । उही साइकल लिएर ध्रुवचन्द्र बागबजारको होटल कोरोनेसन पुगे, जहाँ कवि सक्सेना बसेका थिए । अनि, भर्खरै ‘रूपरेखा’ मा छापिएको आफ्नो कविता ‘रानीपोखरीको किनारमा’ सुनाए, तारन्तारको आफ्नै हिन्दी अनुवादसहित । ‘कवितामा यो सांस्कृतिक नगरीको इतिहास लुकेको छ, लेख्न नछाड्नुहोला’ भनेर कवि सक्सेनाले उक्साएपछि ध्रुवचन्द्रभित्रको कवि–चेत एकपटक हौसिएको थियो, बौरिएको थियो ।
यसअघि उनको ‘बालुवामाथि’ उपन्यास गर्भाधानमै थियो । ‘रूपरेखा’, ‘रचना’, ‘कलाकार’ जस्ता पत्रिकामा कथाहरू छापिने क्रममै थिए । यही रनाहामा कवि ध्रुवचन्द्रले आफ्ना भएभरका, झन्डै २ दर्जन कविताको हाते संग्रह बनाए । र, त्यो लिएर मदन पुरस्कार गुठीका प्रमुख कमल दीक्षितलाई भेट्न पाटनढोका पुगे । किनभने भर्खरै गुठीबाट कुमार नेपालको कवितासंग्रह (भत्केको पर्खाल) आएको थियो । त्यही थाहा पाएर कविता .संग्रह छपाइमाग्न उनी क.दी.सामु पुगेका थिए— उही साइकल लिएर । भर्खरको उम्दा कवि, अस्तित्ववाद/यथार्थवाद आदिबारे थोरबहुत कुरासमेत बुझेको कवि । क.दी.लाई यी ‘वाद’ हरू राम्ररी सम्झाएर ध्रुवचन्द्र फर्किए, त्यो पाण्डुलिपि त्यहीं छाडेर । यत्तिका वर्षपछि बल्लतल्ल थाहा भएको छ— ध्रुवचन्द्रको त्यो कविता पाण्डुलिपि ‘हेङ्गरमाथि झुन्डिएको आकाश’ मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा दर्तामा देखिन्छ । तर, पाण्डुलिपि भने जीवितै छ/छैन— फेरि सोधपुछ गर्नैपर्ने हुन्छ ।
उसो त भन्नैपर्ने हुन्छ, यो साइकल कथानकका ‘प्रोटागोनिस्ट’ ध्रुवचन्द्र अलिक ‘होसप्रसाद’ टाइपका पनि छन् । लाउन–खानमा खासै सोख नराख्ने । कतिसम्म भने हातको घडी हराइजाला भन्ने भयले बरु घडी कहिल्यै बाँध्नै नचाहने । यसो बाटोमा हिँड्दा कसैलाई समय सोधेमा पुगिहाल्थ्यो । अथवा, साइकलमा पाइडल मारिरहेकै बेला आकाशको घाम हेरे भैहाल्छ, समय अड्कल मार्नु न हो ! किन गहनाजस्तो सोखमा बेरिएर हिँड्ने ? अचम्मको उत्तरआधुनिक सोच थियो त्यहीबेला । साहिर लुधियानवीले कुनै फिल्ममा लेखेको गीतजस्तै— ‘रहनेको घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा’ टाइपको सोच ।
एक दिन हतारिँदै उही साइकलमा रफ्तारको पाइडल मार्दै उनी त्रि–चन्द्र आइपुगे । सरासर कक्षामा पुगे र, बिन्दास बनेर सधैंझैं पढाउन थाले । पढाइरहेकै थिए, सामुका सारा विद्यार्थी मुसुमुसु मुद्रामा उनले देखे । कुरा के रहेछ भने उनको सर्टको एकातर्फको काखीमुखी पूरै उध्रिएको रहेछ । भित्र सेन्डो गन्जी मात्रै थियो । त्यो रमिता देखेर विद्यार्थी मुस्काएको थाहा पाएर झन्डै सर्मालु मुद्रामा उनी कक्षाबाट निस्केका रहेछन् । रफटफ, बिन्दास, रम्ता–जोगी ? जे भन्नुस् । चल्ता है... । अनि उही मझौला साइकल लिएर थोरै लज्जित बनेर र धेरै हतारमै बाटा लागेछन् ।
फेरि ध्रुवचन्द्रबारेका किस्सा अनेक बन्थे, साइकलबाहेक पनि । सरकारी क्याम्पसमा पढाउने भएपछि कहिलेकाहीं सरकारी कार्यक्रम, दिवस आदिमा दौरा–सुरुवाल लाएरै जानुपर्थ्यो । त्रि–चन्द्रमै भएको हुनुपर्छ एउटा दिवस, जहाँ उनी राष्ट्रिय ड्रेस लगाएर गएका थिए । क्याम्पसको एकातर्फ रूखबिरुवा, झारलहरा प्रशस्तै थिए । त्यही साँगुरो कुनोबाट अघि बढिरहेकै बेला उनको ढाकाटोपी भने माथि कुनै होचो रूखको हाँगा वा लहरामा अड्किएछ, ७–१० पाइला अघि बढेर मात्रै उनले चाल पाएछन् । र, फर्केर फेरि टोपी तानेर लगाउँदै समारोहमा गएछन् ।
तर, किस्सा कस्तो फैलिदिन्छ भने त्यसबेला बादेपा (बालमुकुन्ददेव पाण्डे) सहित केहीले ध्रुवचन्द्रको ढाकाटोपी छिनभरलाई रूखको हाँगामा अड्केको थाहा पाएका रहेछन् । हल्ला कतिसम्म फैलिएछ भने ‘ध्रुवचन्द्रले टाउकोको टोपी कतै अड्किएको (छाडिएको) थाहै पाएनछ । पूरै कलेजको काम सकेर, कक्षा पढाइसकेर बेलुका घर फिर्ने बेलामा मात्रै हाँगामा झुन्डिएको टोपी देखेर लगाउँदै साइकलमा बत्तिएरै चाबहिल डेरा पुगेछ... ।’
संयोग कस्तो छ भने ध्रुवचन्द्रको पछिल्लो उपन्यास ‘चकमन्नमा एकान्त’ को सुरुआती लाइनमा लेखिएको छ— ‘निद्राबाट बिउँझनासाथ म अलमलमा पर्छु । यो अलमल आजको होइन, जीवनको थालनीदेखि नै हो ।’ यस्तै छन्— ध्रुवचन्द्रसँगका अनन्त किस्साहरू, जुन एकाएक आज टुँसाएका होइनन्, उनी ध्रुवचन्द्र गौतमको चोला लिएर यो धर्तीमा आएदेखिकै हुन् ।
‘क्राइसिस अफ आइडेन्टिटी’
आजको विज्ञानले पनि भेउ पाउन नसकेको कुरो हो— झुक्किँदो पहिचान ।
एक जुगमा ध्रुव्रचन्द्र वीरगन्ज छँदै रुप, उमेर र प्रतिभाले खुबै चिनिएकी थिइन्— प्रेमा शाह । ‘पहेंलो गुलाफ’ कथाको साहित्यिक स्वजनमाझ चर्चा चर्कै थियो । प्रेमाको रुपरंग र अदाको चर्को फ्यान बनेका थिए— क्याप्टेन जनकबहादुर राणा र ध्रुवचन्द्र गौतम । तर, दुर्भाग्य भनौं— वीरगन्ज क्याम्पस वरपर निकै तन्मयपूर्वक रमिता हेर्न जानेमध्येका गौतम भने वर्षौं वर्षसम्म अर्कै रुपवती ‘प्रेमकुमारी’ लाई हेरेर र पछ्याएर दंगिएका रहेछन् । यो कुरा त्यसबेला थाहा भयो जब काठमाडौं आएर मात्रै एकदिन एउटा कविता गोष्ठीमा ध्रुवचन्द्रले असली प्रेमा शाहलाई चिन्न पाएका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले आफ्नै मानभवन निवासमा २०२२ को कुनै ठण्डी महिनामा आयोजना गरेको कवि गोष्ठीमा मदन रेग्मी, द्वारिका श्रेष्ठ, कृष्णभक्त श्रेष्ठसहितका कविजन पुगेका थिए । ‘के सारो सर्माउनुभएको ध्रुवचन्द्रजी, अगाडि आउनुहोस् न’ भनेर उनै प्रेमाले बोलाएपछि मात्रै ध्रुवचन्द्रको सातो फिरेझैं भएको थियो, गुमेको पहिचान फर्किएजस्तै भएर ।
उसो त नाम–बदनाम अथवा ख्याती–कुख्याती एकअर्काका पूरकझैं हुन् । नाम र ख्याती कमाउन महिनौं वा वर्षौं लाग्न सक्छ । तर, बदनाम–कुख्याती छिनभरमै आइलाग्छ, यो फैलिहाल्छ पनि । त्रिचन्द्रमै पढाइरहेका बेला र उम्दा कविको पहिचान बन्दै गरेका बेला वेद विद्याश्रमको छात्रवृत्ति पाउनेको सूची गोरखापत्रमा निस्किएछ । त्यसको पहिलो नम्बरमा नाम उही थियो— ध्रुवचन्द्र गौतम । अनि के चाहियो र ? कहिले कवि जमघट त कहिले क्याम्पसका गुरुजनका माझ तिखो वचन सुनिन थालेको थियो— ‘ओहो, ध्रुवचन्द्रले त संस्कृत पनि छाडेनछ, कस्तो अपहत्ते होला...।’
१८ वर्षको उमेरमा ध्रुवचन्द्र गौतम
मनको बह कसैलाई नकह । अब यो ‘संस्कृत पण्डितधारी ध्रुवचन्द्र गौतम म होइन’ भनेर स्पष्टीकरण कहींकतै दिनै नपार्इं हल्लाको आगो चौतर्फी फैलिसकेको थियो, त्यो आगो आफैं कुनैदिन निभ्ला भनेर पर्खनेबाहेक अरु उपाय पनि थिएन । त्यो आगो त्यसरी नै निभ्यो पनि, लामो पर्खाइपछि ।
एक जमानामा ध्रुवचन्द्रसँग अनुहार उस्तै र उही देख्ने एउटा पात्र कसैले भेटाइदिएको थियो, ती पात्र पूरै कपी–क्याट थिए । तिनी आरएनएसीमा अधिकृत रहेछन् । एकअर्कालाई भेटेर र हेराहेर गरेर ती दुवै अचम्मित भएका थिए । ध्रुवचन्द्रलाई लालु यादवको चेहरामा तुलना गर्नेहरू त कति छन् कति । तर, अहिले गर्न लागेको कुराको ‘इसेन्स’ अलग्गै छ ।
कस्तो भने, २०२२ वैशाखमा ध्रुवचन्द्रको एउटा कथा छापिएको थियो, ‘रूपरेखा’ पत्रिकामा— ‘पहिलो प्रेमको संस्मरण’ शीर्षकमा । एउटी शोडषी–रूपवती केटी थिइन्, ललिता नामकी । दुईबीच दोहोरो र गहिरो प्रेम नरहे पनि अरूले सुनाएका, उडाएका र जिस्क्याएका किस्साहरूमाझ केटाको एकतर्फी प्रेम गढेको थियो । एकाएक एक दिन केटी अलप भई । सुनियो— ऊ राजविराजमा बसेकी छे । त्यो प्रेमी पात्रले शब्दकोशमा भएका मिठा र सुकोमल शब्द भरेर लम्बेतान प्रेमपत्र पनि पठायो । अनि, सुखद जवाफ आउने आस गरिबस्यो । तर, अन्त्यमा थाहा भयो— ललिता नाम गरेकी त्यस्ती केटी राजविराजमा कोही छैन, कतै छैन ।
यसरी प्रेम–काण्ड ‘ब्लफ’ मा परेजस्तै कथा यो साइकलसँग पनि छ । आखिर ध्रुवचन्द्रको साइकल हराएकै थिएन भने त्यो साइकल हराउने र एकतमासले हल्ला फिजिने त्यो ध्रुवचन्द्र को थियो ?
यसरी ध्रुवचन्द्रले ५० वर्षअघिका यी सबै कुराहरू भुल्नै लागेका के थिए, पुस महिनाको एउटा चिसो बिहानीले फेरि धेरै कुरा ब्युँताउने काम गर्‍यो । त्यो दिनैभर ध्रुवचन्द्रका नाममा हत्तपत्त नआउने फोनहरू पनि आइरहे, ‘हाउन्टिङ मेमोरी’ लिएर । आश्चर्य, उनलाई एकाबिहानैबाट फोनको धुइरो लाग्यो— कोरोना कहरकै माझ । उहिले त्रि–चन्द्र छँदैका अंग्रेजीका प्रोफेसर केदारभक्त माथेमा सरदेखि थुप्रै कवि–लेखक–कलाकारका फोन तारन्तार पाइरहे । धेरैजसोले हालचाल सोधे, कतिपयले मनोबल उच्च राख्नेबारेका ‘सत्ज्ञान’ सुनाइरहे । ‘त्यसै फोन गरेको, हजुरसँग कुरा गर्न मन लागेर गरेको नि’ पनि भन्थे कतिपयले ।
त्यही फोनको लर्कोमा अर्का शुभेच्छुक पुरुषोत्तम बस्नेतको पालो थियो । बरु उनले पो सुनाए— ध्रुवचन्द्रलाई कोरोना भएकोबारे । ‘ए दाइ, ध्रुवचन्द्र गौतमलाई कोरोना भएको भनेर कहीँ–कतै अनलाइनमा समाचार आएको छ । तर, फोटो भने अर्कैको परेछ...’, पुरुषोत्तमले त्यो दिनैभर आएका फोनको रहस्य टुंग्याउँदै सुनाएका थिए । ओहो, यसकारण अहिले पनि पक्कै छ त्यो (अर्को) ध्रुवचन्द्र गौतम, ऊ यही सहरमा मौजुदा हुनैपर्छ ।
यसरी धेरैपछि थाहा भएको छ— यो सहरमा दुई जना ध्रुवचन्द्र गौतम रहेछन् । एक जना शंकरदेवतिर वाणिज्यका विद्यार्थी, अर्का त्रिचन्द्रमा नेपालीका गुरुजी । ऊ जमानामा दुवै ध्रुवचन्द्रको हिरो साइकल रहेछ, उही मझौला मार्काको । फेरि यो सत्य कथामा कत्रो दुःखान्त संयोग छ भने बरमजियाका ‘उही बाजेको उही पेडा’ भनेजस्तै भैदिएको छ यो नाम । आश्चर्य ! यी दुई ध्रुवचन्द्रको अहिलेसम्म एकअर्कासँग भेट हुन सकेको रहेनछ— धर्ती एउटै, आकाश उही भए पनि ।
र, यतिका वर्षपछि यो रहस्यमयी चोरी काण्डका बारे भन्नैपर्छ— त्यो चोरिएको साइकल आज हामीले चिनेका ‘अलिखित’ ध्रुवचन्द्रको थिएन । स्वभावतः रोमान्टिक शिक्षक, सुषुप्त–कवि, उम्दा–लेखक र तिखो ‘सुसेलीविद्’ भएकै आधारमा चोरिएको साइकलमा ‘निमित्त नायक’ ध्रुवचन्द्रको नाम हठात जोडिएको थियो । उसोभए शंकर लामिछानेलाई चोरीको बात लगाएर हराइजाने ‘कुमुदुनी’ जस्तै को हुन् त अर्का ध्रुवचन्द्र गौतम ?
यसरी यो साइकल चोरीको इतिहास कुनै ‘कथाकरण’ (फेबुलेसन) मात्रै पक्कै होइन । बरु एक (अज्ञात) ध्रुवचन्द्रले अर्को (ज्ञात) ध्रुवचन्द्रलाई वर्षौंवर्षदेखि सताइरहेको, झस्काइरहेको र बहकाइरहेको तिलस्मीझैं लाग्ने यथार्थ–कथा हो यो । यसकारण यसपालि भने आजितै भएर एउटा सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको छ— ‘मेड इन वीरगन्ज’ ध्रुवचन्द्र गौतमसँगको सहमतिमै ।
‘ए, परं अज्ञात ध्रुवचन्द्र गौतमजी ! एकपटक साँच्चैका जानेमाने ध्रुवचन्द्र गौतमलाई भेट्न आइदिनोस् न है । हामी महाराजगन्ज, चक्रपथको चाइना भ्यालीमा आउने शनिबार अपराह्न पर्खिरहेका हुनेछौं । आउनुहोला है... ।’
नेपाल एकीकरणको आर्थिक कोण
‘पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान सफल हुनुपछाडिको श्रेय उनलाई मात्रै दिनु हुन्न । उनका योग्य सेनापति र भाइहरूको पनि यसमा ठूलो योगदान छ । पृथ्वीनारायणलाई गोर्खाका विभिन्न क्षेत्रका जनताले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । त्यसमा सयौं–हजारौंको योगदान छ ।’
पुस २४, २०७७ त्रिरत्न मानन्धर
पृथ्वीनारायण शाह सम्झँदा मेरो दृश्यमा आउँछन् बिसे नगर्ची । भनिन्छ– पृथ्वीनारायण शाहले सैन्य अभियान सुरु गर्नुअगाडि बिसे नगर्चीले उनलाई एक रुपैयाँको सहयोग गर्न चाहे । पृथ्वीनारायणले उल्टै सोधे, ‘जाबो यति सहयोगले के नै हुन सक्छ र ?’ बिसेको उत्तर थियो, ‘म एक्लैले पो एक रुपैयाँ दिएँ, सबैले यस्तै एक–एक रुपैयाँ दिने हो भने त धेरै पैसा जम्मा हुनेछ ।’ बिसेको यो उत्तरबाट पृथ्वीनारायण निकै प्रभावित भए ।
पृथ्वीनारायणले विभिन्न राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एकै सूत्रमा बाँधे । यस कामलाई पछि उनका उत्तराधिकारी राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले अगाडि बढाए । त्यतिबेला नेपाल ५० भन्दा बढी राज्यमा विभाजित थियो । यो नेपालको एकीकरण थियो वा गोर्खाको विस्तृतीकरण थियो, यसबारे इतिहासका लेखकबीच मतभिन्नता कायमै छ । मेरो मत छ— पृथ्वीनारायणले जुन अभियान सुरु गरे, सुरुमा त्यो गोर्खाको विस्तृतीकरण नै थियो । तर, यो अभियान नेपालको एकीकरणमा टुंगियो ।
नेपाल एकीकरणको आर्थिक पक्ष यहाँनिर निकै विचारणीय छ । एउटा तथ्य के निश्चित छ भने गोर्खा आर्थिक पक्षबाट गरिब राज्य थियो । यो स्थिति पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मात्र थिएन, उनीभन्दा अगाडिदेखि नै गोर्खा आर्थिक रूपमा बलियो थिएन । त्यसैले त गोर्खाका राजाले त्यहाँका जनतासँग पैसा सापटी लिएका प्रमाणहरू छन् । त्यतिबेला राजाले जनतासँग पैसा सापटी लिनु सामान्य विषय थिएन ।
आधुनिक समयमा राज्यले जनतासँग पैसा उठाउने चलन त छ । तर, त्यतिबेला यति सापटी लिएँ भनेर रसिद नै दिनुको अर्थ हो, गोर्खाको आर्थिक अवस्था पक्कै राम्रो थिएन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू विजय गर्नुपछाडिको एउटा मुख्य उद्देश्य आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । त्यतिबेला यसलाई नेपाल उपत्यका नै भनिन्थ्यो, काठमाडौं उपत्यका भनेर पछि मात्रै भन्न सुरु भएको हो । उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न थिए ।
मल्ल राज्यहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुको मुख्य कारण थियो— काठमाडौं उपत्यकाको भूमि निकै उब्जाउ हुनु ! त्यसैले भनिन्थ्यो— उपत्यकामा तीन महिना राम्रोसँग काम गर्‍यो भने एक वर्ष मज्जाले खान पुग्थ्यो ।
खासमा मध्यकालमा काठमाडौं उपत्यकामा धेरै गुठी स्थापना हुनुपछाडिको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो कि तीन महिना काम गरेपछि बाँकी समय यहाँका जनताले अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिने समय पाउँथे । काठमाडौंमा त्यसबेला गुठीसँगै मनोरञ्जनका अन्य विभिन्न साधन र उपाय पनि विकसित भए । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह नेपाल उपत्यकातिर आकर्षित भएका थिए । उपत्यका समृद्ध हुनुको अर्को कारण यहाँको समथल, उब्जाउ जमिन हो । यहाँ धेरै डाँडाकाँडा छैनन् । यसको ठीक विपरीत गोर्खामा धेरै डाँडाकाँडा थिए, टार थिए । त्यहाँका जग्गा उपत्यकाका जति उब्जाउ थिएन् । उपत्यकाको जनसंख्या पनि धेरै थिएन । र, त्यो जनसंख्या राज्यका लागि बोझ पनि बनेको थिएन । बेलाबेला यहाँ आउने महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि उपत्यकाको जनसंख्या कहिल्यै बढ्न पाएन । त्यसैले यो समृद्ध रह्यो ।
चन्द्रागिरिबाट नेपाल उपत्यका देखेपछि नै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, ‘काठमाडौं, लतिलपुर र भक्तपुरको राजा हुन पाए, मजस्तो भाग्यमानी को हुन्थ्यो होला !’ यसपछाडि राजनीतिक नियन्त्रण र आर्थिक दुवै कारण छन् । पृथ्वीनारायण मात्र होइन, त्यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट आक्रमण भएका छन्, विशेषत: पश्चिमतिरका खस राजाहरूबाट । खासमा काठमाडौंको वैभव देखेरै आक्रमण भएको थियो । धनी देशलाई आक्रमणको डर जहिल्यै रहन्थ्यो ।
यही तथ्यमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विजय अभियान नुवाकोटबाट सुरु गरेका थिए । उनले नुवाकोट नै किन पहिले रोजे भन्नेमा केही कारण छन् । जस्तो, नुवाकोटलाई काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिम ढोका पनि भनिन्छ । त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकामा सीधा आक्रमण गर्न सजिलो थियो । फेरि नुवाकोट अग्लो ठाउँमा अवस्थित छ, त्यसैले सैनिक तयारीका लागि पनि यो लोकेसन उपयुक्त थियो । तर, त्यस आक्रमण पछाडिको मुख्य कारण भने आर्थिक थियो ।
काठमाडौंका मल्ल राजको भोटसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो । त्यसबाट काठमाडौंलाई धेरै आर्थिक फाइदा भइरहेको थियो । भोटका लागि मुद्रा छाप्ने काम पनि काठमाडौंका राजाले नै गर्थे । यसरी टक छापेबापत काठमाडौंले सुन अथवा चाँदी लिने गथ्र्यो । यसक्रममा बट्टा काट्ने चलन पनि थियो । काठमाडौंको भोटसँगको व्यापारको मुख्य बाटो केरुङ थियो, भक्तपुरका राजाको बाटो भनेको कुती भयो । केरुङ जाने बाटो नुवाकोट नै थियो ।
त्यसैले नुवाकोट जित्ने हो भने काठमाडौं र भोटको व्यापार रोक्न सकिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितिसकेपछि भोटसँग सम्पर्क राखेर व्यापार बढाउन पनि खोजे । त्यहीबेला काठमाडौंबाट जाने मुद्रामा मिसावट हुन थालेको थियो । यसको कारण पनि बढी फाइदा लिन खोज्नु नै थियो । मिसावटका कारण केही वर्षपछि नै ती मुद्रा कालो हुने भए, त्यसैले यसलाई काला मोहर पनि भन्ने गरिन्थ्यो । यही स्थितिको फाइदा लिएर नुवाकोट जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भोटमा सन्देश पठाए, ‘हामी शुद्ध चाँदीको मोहर पठाउन सक्छौं ।’
यसमा भोट तयार पनि भयो । र, पृथ्वीनारायण शाहले साँच्चै शुद्ध चाँदीका मुद्रा छापेर भोट पठाउन थाले । यसबाट उनलाई धेरै आर्थिक फाइदा हुन थाल्यो । एक किसिमले भन्दा काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरू जित्ने आधार तयार पार्न पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले नुवाकोट आफ्नो बनाए । र, यसपछाडि पनि आर्थिक कारण नै मुख्य रह्यो । त्यसपछि पृथ्वीनारायणले काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका मुख्य–मुख्य इलाकाहरू पनि जिते । यसपछि त काठमाडौं उपत्यकामा आउने र बाहिरिने सामानमा उनको नियन्त्रण सुरु भयो ।
यसले एकातर्फ काठमाडौं उपत्यकाका राज्य आर्थिक रूपमा कमजोर हुन थाले भने अर्कोतर्फ गोर्खा आर्थिक रूपमा अझ बलियो भयो । यसैक्रममा पृथ्वीनारायणले युद्ध र त्यसमा सहभागी हुने आफ्ना सैनिकका लागि सरसामान ठीकसँग समयमै पुर्‍याउन थाले । नत्र यसअघि पृथ्वीनारायणले यसका लागि निकै समस्या बेहोर्नुपरेको थियो । नुवाकोट विजय र भक्तपुर विजयमा २५ वर्षभन्दा बढी समयको अन्तर छ । र, यो निकै लामो समय हो ।
त्यो २५ वर्षमा आर्थिक रूपमा बलियो नभएको भए, पृथ्वीनारायण शाहले स्थिति सही ढंगले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो । पछि उनले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगाए । यसकै कारण त्यहीबेला काठमाडौंमा एक धार्नी कपासको ६ रुपैयाँ पुग्यो । र, एक माना नुनको दुई रुपैयाँ । यसले काठमाडौं उपत्यकाको आर्थिक अवस्था अझै नराम्रो भयो, कपास र नुन त आउनै दिइएन । नाकाबन्दी लगाएपछि पृथ्वीनारायण आर्थिक रूपमा अझै सबल भए ।
यो काठमाडौं जित्नु चार/पाँच वर्षअगाडिको हो । पृथ्वीनारायणले कीर्तिपुर जित्नुअगाडि सबैभन्दा पहिले मकवानपुर हात पारे । यसपछाडिको मुख्य कारण पनि आर्थिक नै थियो । यसअघि उनले जे जति जिते, ती सबै पहाडि इलाका थिए र त्यहाँबाट उनलाई खासै आर्थिक लाभ प्राप्त भएको थिएन । मकवानपुर जितेपछि पृथ्वीनारायणका लागि तराईसम्मको बाटो खुलेको थियो । मकवानपुर आफैं पनि तराईको समृद्धशाली राज्य थियो ।
त्यसैले मकवानपुर जितेपछि उनको स्थिति अझ मबजुत भयो । काठमाडौंका राज्य जितेपछि त उनको आर्थिक स्थिति स्वत: राम्रो भयो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै स्रोतमा उनको नियन्त्रण भयो, विशेषत: उब्जाउ जमिनमा । यसपछि त उनले आफ्नो राजधानी नै काठमाडौं सारे । राजधानी काठमाडौं सार्नुपछाडि पनि ठोस आर्थिक कारण थियो । भलै यसको पछाडि रणनीतिक कारण पनि थियो । किनभने काठमाडौंबाट पूर्व र पश्चिमतिर आफ्नो सैनिक अभियान सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहले पक्कै पनि यसका लागि आर्थिक कारण पनि विचार गरेका थिए । काठमाडौं राजधानी भएपछि उनका भारदार पनि यतै आए । उनलाई गोर्खामा हुँदा जुन दु:ख हुन्थ्यो, अब त्यो भएन, विशेषत: आफ्ना सैनिक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ।
एक वर्षको अन्तरमै पृथ्वीनारायणले ललितपुर र भक्तपुर पनि जिते । यस्तोमा निचोडमै भन्न सकिन्छ, गोर्खाका राजाका रूपमा उनी गरिब थिए । नेपाल उपत्यका जितिसकेपछि उनी अत्यधिक शक्तिशाली भए, राजनीतिक र सैन्य दृष्टिकोण दुवैबाट ।
सँगै आर्थिक रूपबाट पनि सम्पन्न भए । जतिबेला पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सैन्य अभियान सुरु गरे, त्यतिबेला आफ्ना सैनिकलाई तलबका रूपमा जग्गा दिने चलन नै थियो । यसको अर्थ सैनिकलाई तलबमा पैसा नै नदिने भन्ने होइन, केही मात्रामा पैसा पनि दिने गरिन्थ्यो । त्यस समय गोर्खा मात्र होइन, नेपाल उपत्यकामै पनि जीविकोपार्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै कृषि थियो । त्यतिबेला कृषिसँगै जीविकोपार्जनका लागि अरू अवसर थिए, व्यापार र घरेलु उद्योग ।
मानिसहरू व्यापारमा निकै कम संलग्न थिए । तर, घरघरमै सानोतिनो उद्योग भने चल्थ्यो । जस्तो धेरैको घरमा धान कुट्ने कुटी हुन्थ्यो, कपासबाट कपडा बुन्ने यन्त्र नै हुन्थ्यो । तर, कृषि नै सबैभन्दा प्रमुख पेसा रहने गथ्र्यो । त्यसैले तलबका रूपमा जग्गा दिने चलन सुरु भयो । सेना त युद्धमै हुन्थे, तर उनको परिवारले काम गरेर खाओस् भनेर पनि जग्गा दिने चलन सुरु भएको थियो । खासमा यो गोर्खामा मात्र सीमित थिएन, अन्यत्र पनि थियो । र, यो परम्परा राणाकालसम्मै चलिरह्यो ।
युद्धकै बेला कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि पृथ्वीनारायण शाहले आर्थिक नियम बनाएका थिए । यसबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि उपलब्ध छन् । युद्धका बेला कति–कति रकम झिक्ने र कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । पर्याप्त पैसा भएन भने युद्धमा समस्या हुन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग थाहा थियो । पछि यो तथ्य उपत्यकाका मल्ल राजाले पनि अनुभव गरे । लगातार धेरै वर्ष युद्ध गर्नुपरेपछि उपत्यकाका राज्यको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर भएको थियो ।
यसैक्रममा काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्लले विभिन्न देवीदेउताका नाममा चढाएको सुन–चाँदी पनि झिके । जयप्रकाशले यस्तो काम गरेपछि जनताले त्यस कदमको व्यापक विरोध गरेको इतिहास छ । वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार, आफ्नो राज्य बचाउन जयप्रकाश मल्लले देवीदेउताका सम्पत्ति मासे भनिएको छ । यो काम खासमा उनले आफ्नो देश बचाउन गरेका हुन् । तर, उनलाई यही कारणले गाली पनि गरिएको छ ।
देवीदेउताका सम्पति झिक्ने क्रममा उनले भनेका रहेछन्, ‘हे ईश्वर, देश रक्षाका लागि मैले यस्तो काम गर्नुपर्‍यो, देश बचाउन युद्ध गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले मैले यस्तो किसिमको काम गर्नुपर्‍यो । मैले यसलाई उधारो लिएको सम्झनुहोला, यो सधैंका लागि मासेको होइन पछि पूर्ति गर्छु । केही गरी मैले पूर्ति गर्न सकिनँ र युद्धमा पराजित भएँ भने जसले जित्छ, त्यसले यसको पूर्ति गर्नेछ । यो उसको कर्तव्य हुनेछ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जितेपछि देवीदेउतालाई उनले सुन–चाँदी फिर्ता गरे या गरेनन्, यसको यकिन जानकारी छैन ।
जे होस्, वंशावलीमा वर्णन गरिएको यो तथ्यले देखाउँछ— काठमाडौंजस्तो आर्थिक रूपमा बलियो राज्यलाई पनि ठूलै समस्या परेको थियो । गोर्खा त आर्थिक रूपमा अझ कमजोर राज्य थियो, उसलाई युद्धका कारण त्यस्तै समस्या हुनु त स्वाभाविक थियो । पृथ्वीनारायणको खुबी नै मान्नुपर्छ, गोर्खाले यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेका थिए— सन् १७४२ देखि युद्ध सुरु भएको थियो, उनी राजा भएदेखि नै ।
पृथ्वीनारायणले १७६९ मा भक्तपुर जितेका थिए । यसबीच २७ वर्ष युद्ध भएको थियो । यति लामो समयको युद्ध धान्न पक्कै धेरै पैसा चाहिन्छ । नुवाकोटविरुद्धको पहिलो युद्ध हारेपछि उनी बनारस पुगेका थिए— हातहतियार किन्न । मकवानपुर जितपछि ‘अब विदेशी सेनासँग लड्नुपर्छ’ भनेर उनले फौजको पनि विधिवत् रूपमा निर्माण गरेको पाइन्छ । यी सबै व्यवस्था उनले साँच्चै कसरी गरे, यो खोज र अनुबन्धानकै विषय हो । तर, एउटा तथ्य के निश्चित छ भने पृथ्वीनारायण शाहले आर्थिक पक्षमा आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेका थिए । उनको सैन्य अभियान सफल हुनुको मुख्य कारण यही हो ।
इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मी भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान सफल हुनुपछाडि उनलाई मात्र श्रेय दिनु हुन्न । यसमा उनका योग्य सेनापति र भाइहरूको पनि ठूलो योगदान छ । त्यति मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खाका विभिन्न क्षेत्रका जनताले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । त्यसैले यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै सफलता होइन । त्यसमा सयौं–हजारौं अन्यको पनि योगदान छ ।’
यो भनेको कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सहयोग र अर्थको ठीक व्यवस्थापन पनि हो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि आर्थिक पक्षबारे धेरै उल्लेख छ । जस्तो, ‘प्रजा मोटो भयो भने दरवार बलियो हुन्छ’, ‘जनता समृद्ध भयो भने देश बलियो हुन्छ ।’ उनी के मान्थे भने जबसम्म जनता आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, उनीहरूको असन्तोष बढ्छ र यसले देशलाई बेफाइदा गर्छ । जनता आपैँm आर्थिक रूपमा सबल भए भने जनताले देश हेर्नेछन्, देशले जनतालाई हेर्नुपर्ने छैन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समृद्ध हुर्नैपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १९:४२